26/03/2006: Submitted for publication via web
OGEYSIIS:TODOBAADKA SOMALILAND EE YURUB
War Saxaafadeed: 26th March 2006
TODOBAADKA SOMALILAND EE YURUB
(SOMALILAND WEEK IN EUROPE)
24th – 30th June 2006
Waxaanu ogeysiinaynaa dhamaan dadweynaha Somaliland in Ururka Dallada Jaaliyadaha Somaliland ee Yurub (SSE) iyo Jaaliyada Somaliland ee Norway ay wada qabanqaabinayaan todobaad loogu magac daray “Todobaadka Somaliland ee Yurub” (Somaliland Week in Europe) oo ka bilaabmaya Sabtida 24ka Juun soconayana ilaa Axada 30ka Juun 2006. Barnaamijkan waxaa lagu qaban doonaa caasimada Norway ee Oslo.
Haddaba inaga oo ka wada dheregsan muhiimada doorka ay Jaaliyadaha Somaliland ee Yurub ka qaadan karaan dib u dhiska dalkeenii hooyo; kobcinta dhaqaalaha Somaliland; kaalmaynta danyarta iyo agoomaha; qalabaynta ama dhisida cusbitaalo, iskuulo, kuliyado iyo jaamacadoba waxa haddaba lagama maarmaan ah in Jaaliyadaha Somaliland isku soo dhawaadaan oo ay mideeyaan dedaalkooda iyo waxqabadkoodaba, hadday noqoto horumarinta dalkeenii iyo hadday tahay kor u qaadida tacliinta ubadkeena halkan (Yurub) ku sugan iyo horumarinta Jaaliyadaheenaba.
Barnaamijyo aad u xiiso badan ayaa la qaban doonaa mudadaa todobaadka ah oo ay ka mid yihiin:
Debaaldega iyo damaashaadka xuska sanadguuradii 46aad ee xoriyada Somaliland ee 26ka Juun 1960.
3 maalmood (27ka, 28ka & 29ka Juun) oo la qaban doono kulano iyo shirar (Conferenceand Seminars) lagaga hadli doono danaha Somaliland.
Dood Ku Saabsan Qoraalka Farta Soomaaliga
Carwo ama bandhig ku saabsan arimaha dhaqan-dhaqaale ee Jamhuuriyada Somaliland; iyo wax qabadka ururada iyo hayadaha Somaliland ee Yurub ee ka hawlgala Somaliland.
Ciyaaro kala duwan sida kubada cagta oo ay ku tartami doonaan ciyaartooyga naadiyada Jaaliyadaha Soamliland ee Yurub.
Sidaa daraadeed waxaanu ugu baaqaynaa dhamaan dadweynaha Somaliland in ay ka soo qayb galaan barnaamijkan.
Sidoo kale waxaanu ugu baaqaynaa dadweynaha iyo Jaaliyada Somaliland ee ku dhaqan Yurub in ay magaalo kasta ama dalkasta oo Jaaliyad Somaliland ahi joogto in ay Todobaadkan (24ka - 30ka Juun) ay xaflado ay ku muujinayaan wada jirkooda iyo isku duubnidoodaba ay abaabulaaan. Si uu inoogu noqdo todobaad tilmaaman iyo sumad inoogu noqda hadaynu nahay Jaaliyadaha Somaliland ee Yurub, oo aynu sanad walba si joogto ah u qabano.
Haddaba anaga oo idiin soo gudbin doona barnaamijka oo tafatiran marka uu soo dhawaado Todobaadku, haddii aad u baahataan inta ka horeysa in aad warbixin dheeraad ah ka sii ogaataan waxaad kala soo xidhiidhaan:
Abdiqaadir Keyse Maacaleesh (United Kingdom) – SSE Secretary Tel: +44 1204535093
Mobile: +44 7737772484
Abdirahman (Awliyo) Abdillahi (United Kingdom) – Programme Co-ordinator
+ 44 1204535039?
Mobile: +44 (0) 07900047645
Jama Ali Osman (Norway) – Programme Co-ordinator
Tel: +47 67415793
Mobile: +47 95232157
Saeed Farah (Norway) – Chair of Somaliland Community in Norway
Mobile: +47 98838582
Saeed Adib (Germany) – SSE Commissioner of Sports
Tel: +49 2241403138
Waxaad kaloo nagalasoo xidhiidhi kartaa E-mailka SSE info@sse4.com
The views published here are solely those of its authors (SSE) and do not necessarily reflect those of REDSEA-ONLINE.COM.